Dagaallo Ka Soconaya Xadka Dalalaka Aderbijaan iyo Armiiniya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dagaallo Ka Soconaya Xadka Dalalaka Aderbijaan iyo Armiiniya.
Last updated Sep 27, 2020 219 0
Dagaallo adag ayaa deegaannada xuduuda wuxuu ku dhexmarayaa dowladaha Aderbijaan iyo kooxo gooni goosad ah oo ay taageereyso dowladda Armiiniya.
Warbaahinta caalamiga ah ayaa baahineysa warar la xiriira dagaallo xoogan oo dhexmaraya ciidamada xukuumadaha Aderbijaan iyo Armiiniya, kaas oo salka ku haya muran xaga xuduudaha ah.
Dagaalka ayaa qarxay aroornimadii hore ee maanta, waxaana la isku hayaa deegaanno dhaca xuduud beenaatka kala qeybiya Aderbjaan iyo Armiiniya, iyadoona dhinacyada dagaallamaya ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan.
Maaamulka gobolka lagu muransanyahay ee Naqurni Karibaaq ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku guuleysteen iney dhulka soo dhigaan labo diyaaradood oo hellecopter ah oo ay leedahay dowladda Aderibijaan.
Waxay sidoo kale intaa ku dareen iney gubeen saddex gaari oo noocyada gaashaman ah, hase ahaate waxaa warkaas si adag u beeniyay dowladda Aderbijaan oo sheegtay inaaney jirin wax waxyeello ah oo soo gaartay dhankooda.
Waxaa jira duqeymo xoogan oo ay is dhaafsanayaan dhinacyda dagaallamaya, waxaana gobolka lagu muransanyahay uu taageero xoogan ka helayaa dowladda Armiiniya, oo uu sheegto inuu ka tirsanyahay, taasi oo dagaalka ka dhigeysa mid u dhexeeya labad dal ee Aderbijaan iyo Armiiniya.
Dowladaha Ruushka iyo Turkiga oo kala taageeraya labada dhinac ayaa cambaareeyay dagaalka dib uga billowday xuduud beenaatka Aderbijaan iyo Armiiniya, waxayna ku baaqeen wadahadal deg deg ah.
Howlgal Lagu dilay Dad Nasaaro ah Oo ka dhacay Deegaan hoostaga Mandheera.
Howlgal Lagu dilay Dad Nasaaro ah Oo ka dhacay Deegaan hoostaga…